PPR ပိုက် Fitting Mold
PVC ပိုက် Fitting Mold
Cpvc ပိုက် Fitting Mold
Upvc ပိုက် Fitting Mold
ABS ပိုက် Fitting Mold
PVC Pipe Fitting Mold အအေးမိသော အစက်အပြောက်များကို ဖယ်ရှားပါ။
admin မှ 21-12-02 ရက်နေ့တွင်
PVC ပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ပစ္စည်း အပူချိန်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပလတ်စတစ် ညံ့ဖျင်းမှု နည်းပါးပြီး ဆေးထိုးမှု မလုံလောက်သဖြင့် ယေဘုယျအားဖြင့် အအေးကွက်ဟု ခေါ်သည်။ဖေဖေ...
PVC ပိုက်များအတွက် သန့်ရှင်းရေးသုံးနည်းလမ်း
21-11-30 ရက်နေ့တွင် admin မှ
မည်သည့်ပိုက်အမျိုးအစားကိုမဆို အချိန်အကြာကြီး သန့်စင်ထားရန် လိုအပ်ပြီး PVC ပိုက်လည်း ပါပါသည်။ဒါကြောင့် လူတိုင်းအတွက် သန့်ရှင်းရေးကို ပိုအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် လူတိုင်းအတွက် သန့်ရှင်းရေးသုံး ထုတ်ကုန်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
PVC ပိုက် တပ်ဆင်ရန် မှိုထုတ်လွှတ်ခြင်း။
21-11-27 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ပလပ်စတစ်ပိုက် တပ်ဆင်ရာတွင် တပ်ဆင်ရာတွင် ခက်ခဲရခြင်းမှာ PVC ပိုက်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျသော မှိုများ နှင့် မလျော်ညီသော လုပ်ငန်းစဉ်များ ကြောင့်ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ PV ၏ ပုံသွင်းမှု ယန္တရား၏ မှားယွင်းသော ဒီဇိုင်းကြောင့် ဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
အဖြူရောင် PVC ပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင် အနီနှင့် အပြာ အစင်းကြောင်းများ
အဖြူရောင် PVC ပိုက်ဆက်ကြောင်းများကို ဆေးထိုးပုံသွင်းခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သောအခါတွင် အနီရောင် သို့မဟုတ် အပြာရောင် အမှတ်အသားများသည် ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ဤဖြစ်စဉ်၏အသွင်အပြင်သည် PVC ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်လောင်းခြင်းစနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်...
PVC ပိုက်နှင့်ကိုက်ညီသော မှိုဆေးထိုးစက်ကို ရွေးချယ်နည်း
21-10-12 ရက်နေ့တွင် admin မှ
1. Core အစိတ်အပိုင်းများသည် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပြီး PVC ပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် သံချေးတက်သောပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး သာမန်စက်များကို ပုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် PVC ပိုက်ဆေးထိုးစက်သည် spec ကိုခံယူရန်လိုအပ်သည်...
PVC နှင့် PPR ပိုက်များကြား ကွာခြားချက်
admin မှ 21-09-07 ရက်နေ့တွင်
Longxin Mold Co., Ltd. ကို 2006 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုက် PVC တပ်ဆင်သည့် ပုံစံခွက်များ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် 15 နှစ်ကျော်ကြာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။၎င်းသည် PVC ခေါက်ရာတွင် ကြွယ်ဝသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွေ့အကြုံရှိပါသည်...
PVC Pipe Fitting Mold ဒီဇိုင်း လုပ်ငန်းစဉ် (၄)၊
21-08-20 ရက်နေ့တွင် admin မှ
အဆင့် (၁၀) ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းအား သက်သေပြခြင်း PVC ပိုက်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျမှိုပုံဆွဲခြင်း ဒီဇိုင်းပြီးစီးပြီးနောက် မှိုဒီဇိုင်နာမှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မူရင်းပစ္စည်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
PVC Pipe Fitting Mould ၏ လုပ်ငန်းစဉ် (၃)၊
အဆင့် (၇) PVC ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းမှိုအတွက် သံမဏိကိုရွေးချယ်ခြင်း PVC ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းမှို၏ ပုံသွင်းအစိတ်အပိုင်းများ (အပေါက်၊ အူတိုင်) အတွက် ပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်းကို သုတ်အရွယ်အစားအလိုက် အဓိကအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
PVC Pipe Fitting Mold ဒီဇိုင်း လုပ်ငန်းစဉ် (၂)၊
အဆင့်(၄)- တံခါးပေါက်စနစ်၏ ဒီဇိုင်းတွင် တံခါးပေါက်စနစ်၏ ဒီဇိုင်းတွင် PVC ပိုက်မှို၏ ပင်မအပြေးသမားကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အပိုင်းပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
PVC Pipe Fitting Mold Design လုပ်ငန်းစဉ် (၁)၊
21-08-11 ရက်နေ့တွင် admin မှ
အဆင့်တစ်- ထုတ်ကုန်၏ 2D နှင့် 3D ပုံများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ချေဖျက်ပြီး PVC ပိုက်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျမှို၏ မူကြမ်းကို သတ်မှတ်ပါ။အကြောင်းအရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည်- 1. ထုတ်ကုန်၏ ဂျီဩမေတြီပုံသဏ္ဍာန်...
PVC၊ CPVC၊ PE ပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အားသာချက်များနှင့် အသုံးချမှုများ
21-07-30 ရက်နေ့တွင် admin မှ
PVC ပိုက်မှို၊ CPVC ပိုက်မှို၊ UPVC ပိုက်မှို၊ PE PPR ပိုက်မှို အပါအဝင် မတူညီသော ပစ္စည်းများ၏ ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းမှိုများကို ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။အမျိုးမျိုးသော ပလပ်စတစ်ပိုက် တပ်ဆင်ပုံ ကွဲပြားသည်...
PVC ပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပုံသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
admin မှ 21-07-26 ရက်နေ့တွင်
Longxin Mold Co., Ltd. သည် PVC ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းမှိုများ၊ PVC ဘောလုံးအဆို့ရှင်မှိုများ၊ PVC ဝါယာကြိုးသေတ္တာမှိုများနှင့် PVC ပလပ်စတစ်ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းမှိုများနှင့် PVC ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာဆေးထိုးခြင်းအစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
လိပ်စာ-Xinqian စမတ်မှိုမြို့၊ Huangyan ခရိုင်၊ Taizhou မြို့၊ Zhejiang ပြည်နယ်